ဘလော့ဂ် ရပ်ဝန်းမှာ တစ်နှစ်တာ … | Layma's World
Posted on May 1, 2008 by layma
လေးမက တစ်နှစ်ပြည့် အမှတ်တရအနေနဲ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ကွန့် မန့် လေးတွေကို ( အားလုံးပေါင်း ၉၃ – ၅) slide show လေး လုပ်ထားတာဆိုတော့ မတင်ရရင် ကလိ… ကလိ နဲ့ တော်တော် အခဲမကျေ ဖြစ်မိမှာ …။
Filed under: Analysis, Pieces |
« ကြာပြီ ကြီးဒေါ်နှင့် offline »
သားကြွက်, on May 1, 2008 at 5:46 pm said:
တစ်နှစ်ပြည့်ပြီပဲ ကြိုးစားပေါ့ ခလေးမ ရယ် ဘကြီးတို့့ ရွာက နည်းနည်းတော့ ကြမ်းတယ်လေ :P။
တစ်နှစ်ပြည့်မှသည် နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရျွင်စွာနဲ့ဆက်လက်ဘလော့နိုင်ပါစေဗျာ ဂိုဏ်ချုပ်ရှိရင် ရေးရတာပျော်တယ် အမြဲ အားပေးစကားပြောတာတွေ အတွက်လည်း ကျေးဇူးအထူးပါဗျာ။
Happy Birthday Virtual World မှ ဒေါ်လယ်ကွင်းး ( Queen) ။
P>S=မေလမှာလာမယ့် ဦးမုန်တိုင်းကို ဒေါ်စိုင်ကလုန်း ကနိုင်တယ်တဲ့ဗျ ဆောင်ထားပါလားး 🙂
THS, on May 1, 2008 at 7:23 pm said:
Happy Birthday , one year Virtual World !!!!
နောက် လပေါင်း ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ပါစေ ခင်ဗျာ ။
nu-san, on May 1, 2008 at 8:42 pm said:
Blogspot အစ၊ WordPress အလယ်၊ iblogger အဆုံး ဘလော့ခ် အဆက်ဆက် အောင်မြင်ကျော်ကြားလာတဲ့ “Layma’s Virtual World”ပေါ့နော်… 😀 တနှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ ၂ နှစ်သားဖြစ်မယ့်ဘလော့ခ်လေးအတွက် အားယူရင်း ပို့စ်ကောင်းလေးတွေ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ….
**ပက်ကျံမရှိပေမယ့် ပိုက်ဆံတော့ ရှိတယ်ဟုတ်.. အမတို့ကို မုန့်ကျွေးလိုက်ပါလေးမရယ်.. ကုသိုလ်ရပါတယ်.. နော်.. 😀
Shwun Mi, on May 1, 2008 at 11:46 pm said:
Happy Birthday ပါ.. မလေးမ ရဲ့  ဘလော့လေး ရေ..
အမြဲတမ်း လာအားပေးနေတာ ကျေးဇူးပါ..
အစ်မဆီ စာလာဖတ်ရင် တစ်ခုခုတော့ တွေးစရာ ရတယ်.. လာလည်ရတာပျော်တယ်..
အဆင်ပြေပြေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ နော်..
ညိမ်းညို, on May 2, 2008 at 1:40 am said:
အမလေးမရေ အမရဲ့ ဘလော့တစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ 🙂 တနှစ်ပြည့်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ပါစေ 🙂 🙂 ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ
သဉ္ဖာ, on May 2, 2008 at 8:40 am said:
အစ်မ ဘလော့ဂ်ရဲ့ ပို့စ်အသစ်တွေကို စောင့်စောင့်ဖတ်ရင်း၊ အိမ်ပြောင်းတဲ့နောက် တကောက်ကောက်လိုက်ရင်း တစ်နှစ်ကုန်သွားတာ မြန်လိုက်တာနော်။ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်စွာ ဆက်လက် ဘလော့ဂ်နိုင်ပါစေ။ Happy Birthday Layma’s Virtual World!!
မိ, on May 2, 2008 at 11:49 am said:
ဟယ်…တနှစ်တောင်ရှိပြီလား…wow..နင်တော်တော်ရေးနိုင်ပါလား…တယ်ရင်းရေ…ပျော်ရွှင်စွာနဲ့…ဆက်ပြီးတော့အသစ်အသစ်တွေဆက်ရေးအုန်း…ဒီ Blodg ကိုတော့ဖျက်ရဘူးနော်….မိ..
ဟန်သစ်ငြိမ်, on May 2, 2008 at 4:45 pm said:
ံhApPy AnNiVeRsArY ပါ `မ လေး မ´ ရေ။ ခင်ဗျားနာမည် `မလေးမ´ ကိုနောက်ကဖတ်လည်း ဒီအတိုင်းပဲနော်။
မျှားပြာ, on May 3, 2008 at 3:04 am said:
ပက်ကျံရှိဘူးလား ဟတ်ဟတ် ပြည့်သွားပီ မျက်စိရှေ့မှာတင်နော် 😛
နောင်လည်း လှလှပပလေးတွေရေးနိုင်ပါစေဗျာ ..။
soemoethu, on May 3, 2008 at 5:44 am said:
HAPPY BIRTHDAY..LAYMA’S VIRTUAL WORLD*******
မမရဲ့ ဘလော့လေးထဲကတင်သမျှပို့ စ်တွေကိုစောင့်ဖတ်ရင်းနဲ့ အားပေးနေမယ်နော်…ဆက်လက်၍ဘလော့နိုင်ပါစေ..
Sparrow, on May 3, 2008 at 8:01 am said:
lwansay, on May 3, 2008 at 11:58 pm said:
ပြုတ်ပီးရင် ဒီပွဲအတွက် ဝက်သားဒုတ်ထိုးလုပ်ကြွေးမယ်။ တစ်နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအတွက်။ ဟုတ်ပီလား တီလေး..။ 😛
heartmuseum, on May 4, 2008 at 6:05 am said:
အိမ့်ချမ်းမြေ့, on May 4, 2008 at 2:12 pm said:
တစ်နှစ်မှ .. နှစ်ပေါင်းများစွာ အဒွန့်ရှည်ပါစေ လေးမရေ..
စလိုက်ဒ်ရှိုးလေးလဲ ကောင်းတယ်.. စုံတယ်.. မလေးတော့ လုပ်ရင်းတစ်ဝက်နဲ့ရပ်နေတော့ လေးမလောက် မစုံး)
မိ(မွေးနေ့အမှတ်တရ), on May 5, 2008 at 8:58 am said:
Ulmuka_ဇီးကွက်, on May 5, 2008 at 12:34 pm said:
်အစ်မရေ အစ်မ တက်ဂ် ထားတာ မရေး ဖြစ်သေးလို့ မျက်နှာပူတာနဲ့ လာလာပြီး တိတ်တိတ်လေး ပြန်ပြန်သွားနေတာ။ အခုတော့ မွေးနေ့ဆိုတော့ ၀င်ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။ အစ်မရဲ့ သစ်ပင် ဒီထက်ပိုပြီး အကိုင်းအခက်တွေ ဝေဆာနိုင်ပါစေ။ (ဒါမှ ဇီးကွက်လည်း နေ့ခင်းဖတ်ဆို လာလာနားလို့ ရမှာ :P)
အိမ်လေး, on May 7, 2008 at 9:33 am said:
တစ်နှစ်ပြည့်မှသည် ဘလော့လေး ဆက်လက်ဝေဆာနိုင်ပါစေရှင်…၊
ခွန်မြလှိုင်, on May 7, 2008 at 10:47 am said:
တနှစ်သား ဘလော့သစ်ပင်လေး နှစ်အဆက်ဆက် ဆက်လက် ရှင်သန် စိမ်းလန်းဝေဆာ ပါစေ.. အင်ကြာပျက်ကြီးလဲ အမြန်ဆုံး ပြန်ကောင်းပါစေ… မလေးမရေ
မင်းကျန်စစ်, on May 7, 2008 at 7:26 pm said:
ဒီဘလော့သစ်ပင်လေး ဘယ်ဥတု ဘယ်ရာသီ ဘယ်မုန်တိုင်း ဘယ်လေပြင်း တိုက်တိုက် မပြိုမလဲ ထာဝရ တည်နေနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်တယ် အမလေးမရေ။ တစ်နှစ်လုံးလုံး အစကို မမှီလိုက်ပေမယ့် သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်တော့ ကျွမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အရေးအသား ဆန်းသစ်တဲ့ မလေးမ ၊ ပျော်တတ်တဲ့ မလေးမ ၊ ခင်မင်ခဲ့ကတည်းက အားကျခဲ့တယ်။ ဖတ်ရင်း အားတက်ခဲ့တယ်။ အကိုင်းအခက်စုံတဲ့ ဒီဘလော့သစ်ပင်လေး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝေဆာလှပနေပါစေဗျာ…
thinker, on May 10, 2008 at 6:50 pm said:
သတိရလို့ စိတ်ပူတာနဲ့ လာကြည့်တယ်
သက်ဝေ, on May 13, 2008 at 10:58 am said:
နောက်ကျ ဆုတောင်းအတွက် ဆောရီးပါနော်…
တနှစ်ပြည့် မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင် ပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ဂ်နိုင်ပါစေ လို့ 
နွေကဗျာ, on May 15, 2008 at 1:26 am said:
မလေးမ ကွန်မန့်တွေကို ဖတ်ရင်း သဘောကျခဲ့တာ
winkabar, on May 18, 2008 at 12:53 am said:
မရောက်တာတောင်ကြာပြီ အစ်မဘလော့လည်း တစ်နှစ်တောင်ပြည့်သွားပါလား။ နောက် ဒီထက်ပိုပြီး စာကောင်းပေကောင်းတွေဆက်လက်ရေးနိုင်ပါစေ အစ်မရေ။ ဘလော့လောကမှာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေနော်။ 🙂
အေးချမ်းသူ, on May 24, 2008 at 5:11 pm said:
နေရာထက် စိတ်က အဓိက ကျလို့ မမလေးရဲ့ ဖြူစင်မှုတွေကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ကြိုဆိုနေလျက်ပါ။